Monday March 02, 2020 - 10:40:32 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya waqooyiga suuriya ayaa sheegaya in diyaarado dagaal ay iskasoo rideen dhinacyada dirirtu udhaxayso, wakaaladda wararka ufaafisa nidaamka Nuseyriga ah ayaa xaqiijisay in laba diyaaradood oo nuucoodu yahay Sookhooy24 loogasoo riday gobolka Idlib.
Wasaaradda difaaca Turkiga ayaa dhankeeda ku faantay in ay dhulka soo dhigtay 2 diyaaradood ayna dishay inkabadab 2200 Laba kun iyo laba boqol) askari oo katirsan nidaamka Bishaar Al asad islamarkaana ay burburisay sedax kamid ah andimada difaaca cirka.
Khaluus akaar oo ah wasiirka difaaca xukuumadda dabadhilifka Anqara ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalka ay si toos ah ugu biiriyeenn diyaaradaha Drone-ka turkiga iyo kuwa qumaatiga ukaca.
goor sii horraysay oo shalay ah ayuu Turkigu iclaamiyay in uu shaqada gabay garoonka melleteriga gobolka Xalab ee Alneyrab lagu magacaabo sababa laxiriira beegsiga turkiga, dowladda saliibiyadda ruushka oo garab iyo gaashaan u aheyd nidaamka al-asad xiriir wanaagsanna lalaheyd Turkiga ayaa isaga gaabsatay waxa socda.
Gelinkii dambe ee maalintii shalay ayay xukuumadda Turkiga si rasmi ah u iclaamisay howlgalka ay ugu magac dartay Gaashaanka Guga waxayna doonaysaa in ay howlgalkan kooxaha mucaaradka ah ugu suurtageliso dib uqabsashaday degmooyin iyo deegaanno Idlib katirsan.